२०७६ फागुन १८ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
सेनाका खगेन्द्र भाटले वीरगंज म्याराथनको उपाधि जिते, कार्यक्रमले मधेससँग सेनाको सम्बन्ध अझै प्रगाढ बन्यो –मुख्यमन्त्री
प्रस, परवानीपुर, १७ फागुन/ नेपाली सेनाको मध्यपृतनापति गणले वीरगंजमा आयोजना गरेको म्याराथन प्रतियोगितामा सेनाकै खेलाडीहरूको वर्चस्व रह्यो । एकताको लागि दौड, स्वस्थ देश–स्वस्थ मधेस नाराका साथ शनिवार आयोजित म्याराथन दौड प्रतियोगिताको ४२ किलोमिटरमा सेनाकै खेलाडीहरूले प्रथम, दोस्रो र तेस्रो स्थान हासिल गरे । त्यस्तै २१ किलोमिटरको पुरुष र महिला तर्फ पनि सेनाकै खेलाडीहरू पहिला, दोस्रा र तेस्रा भए । पुरुष ४२ किलोमिटरमा सेनाका खगेन्द्र भाट प्रथम, राजन रोकाया द्वितीय, हरिकुमार रिमाल तृतीय भए । भाटले २ घण्टा २१ मिनेट १५ सेकेन्ड, रोकायाले २ घण्टा २७ मिनेट ४९ सेकेन्डमा ४२ किलोमिटरको दूरी पार गर्दै क्रमशः प्रथम, द्वितीय र तृतीय भए । ४२ किलोमिटरमा प्रथम भाटले २ लाख, द्वितीय रोकायाले डेढ लाख र तृतीय रिमालले १ लाख नगद पुरस्कारसहित शिल्ड र प्रमाणपत्र प्राप्त गरे । ४२ किलोमिटरका खेलाडीहरू बाराको पिलुवाबाट कलैया हँुदै वीरगंजस्थित सेनाको ब्यारेकमा पुगेका थिए । अन्य समूहको दौड वीरगंजबाट शुरू भएको थियो । २१ किलोमिटरको महिलातर्फको दौडमा राजपुरा प्रसाइ प्रथम, पूmलमति राणा द्वितीय र बिन्द
१२ महिलासहित १६७ जनाद्वारा रक्तदान
प्रस, वीरगंज, १७ फागुन/ वीरगंज र निजगढमा आयोजित रक्तदान कार्यक्रममा १२ महिलासहित १६७ जनाले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्रमुख सौरभराज पाण्डेले बताए । बाराको निजगढ नपामा युथ अफ निजगढले आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा ११ महिलासहित ९१ जनाले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजका प्राविधिक धीरेन्द्र झाले बताए । संस्थाकी अध्यक्ष गङ्गामाया श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा अमृतराज उप्रेती, सुमित्रा ढकाल, प्रकाश काप्mले, अरुण साह, सरिता पाण्डे, श्याम श्रेष्ठ, अम्बिका पाण्डे, कमल कटुवाल, अरुणा सुवेदी, अरुणा उप्रेती, रमा अधिकारी, राधा यादव, उषा लामा, सपना बन्जारा, चन्दन चौधरी, दिलीप यादव, रवि सापकोटा, अनिस पोखरेललगायतले रक्तदान गरेको प्राविधिक विकास वर्णवालले बताए । यसैगरी समाज परिवर्तन नेपालले वीरगंज महानगर–२३ परसौनीबिर्तामा आयोजना गरेको रक्तदान कार्यक्रममा १ महिलासहित ७६ जनाले रक्तदान गरेको रक्तसञ्चार केन्द्र वीरगंजको मोबाइल इन्चार्ज डिल्लीमाया घिमिरेले बताइन् । रक्तदान कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधानसभा सदस्य बिचारीप्रसाद
खोलामा फालेर तीन सन्तानको हत्या गर्ने आमा पक्राउ
प्रस, परवानीपुर, १७ फागुन/ पर्सा प्रहरीले आप्mनै सन्तानलाई नदीमा डुबाएर हत्या गरेको अभियोगमा एकजना महिलालाई पक्राउ गरेको छ । पारिवारिक कलहका कारण यस्तो घटना घटाएको आरोपमा भारत बिहार रतनपुर घर भई वीरगंज–२५ श्रीसिया आदर्शचोकस्थित ग्यारेजमा काम गर्ने रमोद साहकी पत्नी उर्मिलादेवीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक गङ्गा पन्तले बताइन् । तीनजना बच्चा बेपत्ता भएको प्रहरीमा उजुरी परेको थियो । शुक्रवार श्रीसिया नदीमा एक वर्षीय छोरा प्रशान्त साहको नदीमा डुबेको अवस्थामा शव भेटिइसकेको छ भने अन्य दुईजनाको अवस्था अज्ञात छ । प्रहरी उपरीक्षक पन्तले सोधपुछमा उर्मिलादेवीले तीन जनालाई नदीमा डुबाएर मारेको प्रारम्भिक बयानमा बताएको जानकारी गराइन् । उनले दुईजनाको अवस्था अहिलेसम्म अज्ञात भएको र प्रहरीको खोजतलाश जारी रहेको बताइन् । ५ वर्षीय छोरा अमरदिप साह र ३ वर्षीया छोरी आसुकुमारीको अवस्था अज्ञात छ । एकवर्षीय छोरा प्रशान्तको शव वीरगंज–१६ पशुपतिनगर छेउ दशगजास्थित श्रीसिया नदीबाट शुक्रवार फेला परेको थियो । पक्राउ परेकी उर्मिलादेवीको माइत बारा, गढीमाई मन्द
वीरगंजमा पौडेल पक्षको भेलामा देउवा पक्ष अनुपस्थित
प्रस, वीरगंज, १७ फागुन/ नेपाली कांग्रेस पर्सा क्षेत्र–३ समितिले रामचन्द्र पौडेललगायत नेताहरू सहभागी नगर सभागृहमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले बहिष्कार गरेको छ । पार्टीको अन्तर्कलह र गुट–उपगुटको राजनीतिको कारण वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यमा आयोजित कार्यक्रमा सभापति देउवा पक्षीय नेताहरू सहभागी भएनन् । जिल्ला सभापति अजयकुमार द्विवेदी, पूर्व सभासद अनिल रुँगटा, केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजाल, अजय चौरसिया, जनार्दन सिंह क्षत्रीलगायत नेता, कार्यकर्ता सहभागी थिएनन् । वर्तमान राजनैतिक परवेशमा नेपाली कांग्रेसको चुनौती र समाधान विषयक छलफल कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, कोषाध्यक्ष सीता यादव, केन्द्रीय सदस्यद्वय प्रकाशमान सिंह, सुजाता कोइराला, नेका पर्साका पूर्वसभापति राजेन्द्रबहादुर आमात्यलगायत नेताहरू सहभागी थिए । एकजना स्थानीय नेताका अनुसार पहिलेदेखि सहमति र छलफल नगरी अचानक कार्यक्रम राखेकोले एक गुट कार्यक्रममा नजाने निर्णयमा पुगेको बताए । पूर्वसांसद रुँगटाले आपूm काठमाडौंमा भएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ज्यू, आक्रोश पोख्ने कि आचरण सुधार्ने ?
ओमप्रकाश खनाल सत्ता सञ्चालक र त्यसको रापतापमा रमाउनेहरूमा एउटा विचित्रको मनोविज्ञान विस्तार भइराखेको छ–हामी जे सोच्छौं त्यही सही हो । हामीमात्र जानकार छौं, अरू सबै अबुझ र अज्ञानी हुन् । जनताले जेसुकै ठानोस्, हामी आप्mनो स्वेच्छाचारीबाट पछि हट्दैनौं । किन भने हामीसँग करीब दुईतिहाई बहुमत छ । हामीलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन । सरकारको दुई वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरणमा प्रधानमन्त्रीले समावेश गरेको तथ्याङ्कीय भूmट र विज्ञ अर्थमन्त्रीको उपाधि पाएका डा. युवराज खतिवडाले किताबमा लिइने अप्रत्यक्ष करलाई प्रत्यक्ष करजस्तो गरी नाफा कमाउने व्यापारीले तिर्नुपर्ने अभिव्यक्ति यही सोचको पछिल्लो उपज हो । सत्ताको दम्भले निम्त्याएको उन्मादको मोल मुलुकले चुकाउनुपरिराखेको छ, यो लोकतन्त्रप्रति भद्दा मजाकबाहेक अन्य केही होइन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरिसकेको छ । यो दुई वर्षको उत्तरार्धसम्म त ओलीले दुईतिहाई बहुमतसहित सत्ता सञ्चालन गरेका छन् । तर, जनतालाई दुईतिहाई जनमतको अनुभूति हुने किसिमको उल्लेखनीय काम अहिलेसम्म देख्न पाइएको छैन । सत्ताको संरक्षण र सहभागितामा भ्रष्टाचार र अनियमित
वर्तमान समयमा बढ्दो तनाव आज व्यक्तिको जीवनमा यस प्रकारले प्रवेश गरेको छ कि त्यसको कारण सधैं नयाँ रोग र समस्या बढ्दैछन् । आज दुनियाँभरमा तनावको कारण रोगग्रस्त हुने बिरामीको सङ्ख्या बढ्दैछ किनभने लामो समयसम्म हाम्रFे तन र मनमा तनाव रहँदा दुवै रोगी बन्छ । ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो कि तनावको यो सङ्क्रमण यति तीव्र गतिले बढ्दैछ कि तनावग्रस्त व्यक्तिको वरपर बस्ने व्यक्तिलाई पनि यसले सहजै शिकार गर्दैछ । हामी आपैंmले आप्mनो जीवनमा तनावका अनेक कारण पैदा गरिरहेका छौं । जसरी जीवनमा तनाव बढ्छ साथै नयाँ–नयाँ रोग पनि बढिरहेका छन् किनभने जीवनमा आउने तनाव त्यस अनुपातमा घटिरहेको छैन, जुन अनुपातमा त्यो बढिरहेको छ । चिकित्सकको भनाइ अनुसार लगभग ९० प्रतिशत बिरामी आप्mनो स्वास्थ्य समस्याको लागि स्वयम् नै जिम्मेवार हुन्छ । जब व्यक्तिको मस्तिष्कले पूर्ण आराम पाउँदैन र त्यसमाथि सधैं दबाब बनिरहन्छ, तब व्यक्तिमाथि तनाव हावी हुन्छ । चिकित्सकीय भाषा अनुसार, तनाव अर्थात् शरीरको होमियोस्टैसिसमा गडबडी । यो त्यो अवस्था हो, जुन कुनै पनि व्यक्तिको शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणालीलाई गडबड गरिदिन्छ
२०७६ फागुन १७ गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
वीरगंज भन्सारका कर्मचारीहरू भन्छन्- गैरमौद्रिक प्रोत्साहन चाहियो, त्रास होइन
प्रस, परवानीपुर, १६ फागुन/ नेपालकै मुख्य भन्सार नाका वीरगंज भन्सार कार्यालय शङ्कराचार्यद्वार र आइसिपी गरी दुईतिरबाट सञ्चालनमा छ । दुवै भन्सार कार्यालयलाई नियमन गर्न भन्सार प्रशासक दरबन्दी पनि सरकारले सृजना गरी पठाएको छ । तर भन्सारका अधिकांश कर्मचारी सरकार र अर्थ मन्त्रालयबाट खुशी छैनन् । भन्सार अधिकारी तथा कर्मचारीहरू सरकारले दिएको राजस्व लक्ष्य उठाउन त्रासपूर्ण वातावरणमा दैनिक १५ घण्टा काम गर्नुपरिरहेको बताउँछन् । “अन्य ठाउँको तुलनामा वीरगंजमा काम गर्न निकै गा¥हो छ, दैनिक बिहान ८ देखि राति ८ बजेसम्मको खटाइले कर्मचारीको मनोबल खस्किंदै गएको छ,” उनीहरूले भने, “सरकारले तलबको ३० प्रतिशत मौद्रिक प्रोत्साहनस्वरूप भत्ता पनि दिने गरेको छ, तर हामीलाई त्यो चाहिंदैन, सहज हिसाबले गैरमौद्रिक प्रोत्साहन पाएर काम गर्न चाहन्छौं ।” कर्मचारीको जीवनमा पनि घरपरिवार र अन्य जिम्मेवारी हुने भन्दै सबै कुरा पैसा मात्रै नभएको वीरगंज भन्सारका कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्रासपूर्ण वातावरणमा काम गर्दा भन्सार जाँचपास पनि सूक्ष्म किसिमले हेर्नुपर्नेमा कहिलेकाहीं हतारमा आपूmहरूबाटै चूक हुने गरेको कर्मच
दुई हप्तामैं चिनीमिल बन्द
प्रस, गरुडा, १६ फागुन/ रौतहटको गरुडास्थित श्रीराम सुगर मिल्स लिमिटेड सञ्चालनमा आएको दुई हप्तामैं बन्द भएको छ । उखु किसानले उद्योगलाई पर्याप्त उखु पु¥याउन नसकेपछि उद्योग दुई हप्तामैं बन्द भएको हो । २०५१ सालदेखि क्रसिङ थालेको चिनीमिलले अढाई दशकभन्दा लामो समयावधिमा सबैभन्दा कम उखु पाएको यसै वर्ष हो । गत वर्ष पनि १४ लाख क्वीन्टलभन्दा बढी उखु क्रसिङ गरेको चिनीमिलले चालू सिजनमा एउटा सक्खर उद्योगभन्दा पनि कम उखु पाएको हो । चिनीमिललाई किसानले उखु बेच्ने तर किसानलाई चिनीमिलले समयमा पैसा भुक्तानी नगर्दा चालू सिजनमा उद्योगलाई किसानले नपत्याएको देखिएको हो । चालू सिजनमा उद्योगले ६७ हजार ६७२ क्वीन्टल उखु क्रसिङ गरेको छ । गत माघ २७ गतेदेखि उद्योग सञ्चालनमा आएको थियो । उखुको अभावमा बन्द हुँदै र सञ्चालन हुँदै आएको उद्योग भने दुई हप्तामा बन्द भएको छ । किसानले पहिलेदेखि नै समयमा भुक्तानी नपाएको र चालू सिजनमा पनि भुक्तानी नपाउने हो कि भन्ने डरले उखु नदिएको उखु उत्पादक सङ्घ रौतहटका सदस्य सफिन्द्रप्रसाद यादवले बताएका छन् । चिनीमिलप्रति भुक्तानीको अविश्वासले गर्दा किसानले यसपालि उखु उपलब्ध नगरा
प्रदेशस्तरीय मत्स्यपालन तालीम सम्पन्न
प्रस, परवानीपुर, १६ फागुन/ क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुरको आयोजनामा १५ दिने प्रदेश नं २ स्तरीय उद्यमी, किसान तथा बेरोजगार व्यावसायिक मत्स्यपालन तालीम शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । परवानीपुरको सभाहल र केन्द्रको पोखरीमा सहभागीहरूलाई माछापालनको प्राविधिक सीप तथा माछापालन व्यवस्थापनका विभिन्न तरीकाबारे गहन छलफल र प्रदर्शन माध्यमबाट प्रशिक्षण दिइएको थियो। प्रदेश नं २ का आठ जिल्लाबाट ३/३ जना गरी कुल २४ जना तालीममा सहभागी थिए । जसमा २० जना परम्परागतरूपमा माछापालन गरिरहेका कृषक र ४ जना बेरोजगार युुवाहरूको सहभागिता रहेको क्षेत्रीय कृषि अनुसन्धान केन्द्र परवानीपुरका क्षेत्रीय निर्देशक केशवप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी गराए । तालीम समापन कार्यक्रममा क्षेत्रीय निर्देशक श्रेष्ठले माछा उत्पादनमा प्रदेश नं २ ले महŒवपूर्ण योगदान दिइरहेको र प्रदेश नं २ मा पनि जनकपुर, सिम्रौनगढ गरी दुईवटा माछा सुपरजोन घोषणा भइसकेको अवस्थामा तालीममा सिकेका सीपहरूलाई आआप्mनो गाउँठाउँमा गएर कार्यान्वयनमा ल्याइ व्यावसायिक माछापालनतर्पm अग्रसर हुन सुझाव दिए । तालीममा सहभागी सप्तरीका उद्यमी किसान रवीन्द्
मधेसी शहीदहरूको सालिक निर्माणको शिलान्यास
प्रस, वीरगंज, १६ फागुन/ विपी उद्यानमा मधेस आन्दोलन–२०७२ मा शहीद भएका मधेसी शहीदहरूको सालिक निर्माण हुने भएको छ। स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी अन्तर्गत सांसद प्रदीप यादवको संसदीय कोषबाट रु २० लाख र वीरगंज महानगरपालिकाको तर्पmबाट रु २० लाख गरी रु ४० लाखको लागतमा मधेसी शहीदहरूको सालिक निर्माण हुन थालेको हो । विपी उद्यानमा शुक्रवार आयोजित कार्यक्रममा सांसद यादव र नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले मधेसी शहीदहरूको सालिक निर्माणको लागि शिलान्यास गरेका थिए । शिलान्यास कार्यक्रममा सांसद यादवले विभेदमा परेका मधेसी, दलित, मुस्लिमलगायत उत्पीडित समुदायको अधिकारका लागि मधेसी वीर शहीदले दिएको बलिदान स्मरणीय रहने बताए । अहिले राज्यबाट प्राप्त अधिकार ती शहीदहरूको बलिदानीको परिणाम भएको बताउँदै उनीहरूको सम्मानमा सालिक निर्माण गर्न लागेको बताए । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका सभापति नेक महम्मद अन्सारी, वडाध्यक्षहरू मनोज कलवार, रामदरश कुशवाहा, तूफान फारूख अन्सारी, समाजवादी पार्टीका वीरगंज महानगर अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र यादवलगायत सहभागी थिए ।
फोटो पत्रकारिता तालीम शुरू
प्रस, वीरगंज, १६ फागुन/ नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश २ र फोटो पत्रकार महासङ्घ प्रदेश २ को संयुक्त आयोजनामा शुक्रवारदेखि वीरगंजमा तीन दिने फोटो पत्रकारिता तालीम शुरू भएको छ । वीरगंज उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा नगरप्रमुख विजयकुमार सरावगीले तालीमको उद्घाटन गरेका थिए । उनले फोटो पत्रकारिता आपैंmमा जोखिमपूर्ण पेशा भएको बताए । हजार शब्दलाई एउटै फोटोले व्याख्या गर्ने बताउँदै उनले उत्कृष्ट फोटोमा भाव जोडिने गरेको बताए । नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेश २ का अध्यक्ष दीपेन्द्र चौहानको अध्यक्ष्Fतामा आयोजित उद्घाटन समारोहमा नेपाल–भारत सहयोग मञ्चका अध्यक्ष अशोक बैद, वीउवासङ्घका अध्यक्ष गोपाल केडिया, पत्रकार महासङ्घ प्रदेश सचिव गुरुप्रसाद गौतम, शाखा अध्यक्ष श्याम बन्जारा, फोटो पत्रकार महासङ्घ प्रदेश २ का अध्यक्ष राम सर्राफ, पर्सा शाखा अध्यक्ष विजय चौहानलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । उद्घाटन सत्रमा प्रशिक्षकहरू किरण पन्त, बालकृष्ण थापा, विजय सिंहले फोटो पत्रकारिताको महŒवबारेमा मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रदेश २ का फोटोपत्रकारहरूको फोटो प्रदर्शनीमा राखिएको छ । प्रदर्शन
दुर्घटनामा बालकको मृत्यु, दम्पती घाइते
प्रस, पंचगावाँ, १६ फागुन/ सवारी दुर्घटनामा जीराभवानी गाउँपालिका निवासी एक दम्पती घाइते भएको छ । पटेर्वासुगौली गापा–३ सडकखण्डमा ना.७त २९४१ नं.को ट्याक्टरले बा.४८प २१०३ नं.को मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएपछि मोटरसाइकलमा सवार जीराभवानी गापा वसन्तपुर निवासी रमेश चौधरी र निजकी पत्नी घाइते भएका हुन् । ट्याक्टरधनी अनिल साह र चालक सतुर मियाँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सडक दुर्घटनामा घाइते दम्पतीको तत्काल उपचार गर्न अप्ठेरो भएको थियो । सो गापामा एम्बुलेन्स सेवा नभएकोले उपचारका लागि लग्न कठिनाइ भएको सुरेश चौधरी थारूले बताए । उनले गापाले एम्बुलेन्ससम्मको व्यवस्था नगरेको तर जनप्रतिनिधिहरूले महँगो सवारीसाधन चढ्ने गरेकामा आलोचना गरे । यसैगरी, विन्दवासिनी गाउँपालिकामा सवारी दुर्घटनामा एक बालकको मृत्यु भएको छ । ना.६५प ६४२९ नं.को मोटरसाइकलले विन्दवासिनी गापा–४ झौवा बस्ने तीन वर्षीय खुर्शिद आलमलाई ठक्कर दिंदा बालकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ । आस महम्मद आलमका तीन वर्षीय छोरा सडकमा खेलिरहेको अवस्थामा मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो । मोटरसाइकल चालक भारत, बिहार बस्ने राजकुम
प्रस, पर्सागढी, १६ फागुन/ पर्सागढी नगरपालिका–५ झिङ्गना टोलमा गएराति विवाह समारोहमा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा व्यङ्ग्य पात्र निर्वाह गर्ने एकजना व्यक्ति मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । राति आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रममा व्यङ्ग्य पात्रको भूमिका निर्वाह गरेर सुतेका जीराभवानी गापा–१ निवासी ४० वर्षीय बोधा उराव शुक्रवार बिहान मृत अवस्थामा फेला परेका हुन् । गएराति कार्यक्रममा सहभागी भएर खानपिन गरेर सुतेका उनी बिहान नउठेपछि जन्तीमा सहभागीहरूले वडासदस्यलाई खबर गरेका र वडासदस्यले प्रहरीमा खबर गरेका थिए । प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा मृत्युको कारण मदिरासेवन भएको बताएको छ । प्रहरीले थप जानकारी शल्यपरीक्षण रिपोर्टपछि आउने बताएको छ ।
पुकार सुवेदी छाउगोठ सुन्नासाथ कतिपय महिलाको जीउ नै सिरिङ्ग हुन्छ होला । हुनत कतिले यो शब्द पहिलोपटक सुनेका होलान् । पहिलोपटक सुन्नेलाई ‘छाउगोठ’को बारेमा नबताइ यसबारेमा भन्नु खासै उचित हुँदैन । महिलाहरू महीनावारी हुँदा गाईको दूध खान नहुने, शुभकार्यमा जाँदा आप्mनो मुख देखाउन नहुने, घरभित्र केही ठाउँमा पस्न नहुने जस्ता बन्देज लगाइन्छन् । महीनावारी भएका महिलालाई घरबाट टाढा बनाइएको सानो झुप्रोजस्तो गोठ ‘छाउगोठ’ हो । जहाँ महिलाहरू पहिलोपटक महीनावारी भएको दिनदेखि ५७ दिनसम्म त्यस गोठमा राखिन्छ । त्यो अन्धविश्वासको गोठ नै ‘छाउगोठ’ हो । छाउगोठले शहरी भेगभन्दा बढी गाउँघर तथा नेपालको सुदूरपश्चिममा गहिरो जरा गाडेको छ । छाउगोठ घरबाट टाढा हुने हुँदा कतिपय महिलाले ज्यान गुमाएका घटनाहरू हामीले बेलाबेलामा समाचारमा पढेका छौं । ज्यान नै सुरक्षित नहुने त्यो गोठको रात हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । अनि ती महिलाको विडम्बना, हरेक महीना यस्तो कष्टकर भोगाइ भोग्नुपर्छ । हुनत शहरी भेगमा छाउगोठ नभेटिए पनि महिलाहरूले महीनावारी हुँदा बेग्लै कोठामा बसेर बारेका हुन्छन् । महीनावारी भएका बेला घरभित्र भए
के अमेरिका र युरोपबाट आएका मात्र पर्यटक हुन् ?
राजेश मिश्र राज्यले भ्रमण वर्ष २०२० मा २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्य लिएको छ । दुई महीना बित्न लाग्यो । २०२० को पूर्वसन्ध्या अर्थात् सन् २०१९ को उत्तराद्र्धमा भ्रमण वर्षको गतिलो तयारी भइरहेका खबरहरू दिनहुँ पढ्न र सुन्न पाइन्थ्यो । तर दुई महीना बित्न लाग्दा प्रचारप्रसार र सक्रियता झन् तीव्र हुनुपर्नेमा ओझेल पर्न लागेको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । हुनत पर्यटन वर्षलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति कुनै एक पक्षको सक्रियताले सम्भव हुँदैन । सबैको साथ र सहयोग अपरिहार्य छ । तर केन्द्रीय सरकारको दायित्व र सक्रियता अत्यधिक देखिनुपर्दछ । सक्रियता कागजमा मात्र होइन, सतहमा देखिनुपर्दछ । कतै भ्रमण वर्ष सिंहदरबार र सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म मात्रै सीमित रहने हो कि ? भन्ने भान पर्न थालेको छ । पहिलेदेखि देखिंदै आएको स्थापित चलन अनुसार कुनै पनि कार्यक्रमको सुरुआत र अन्त्यलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर खूब जोडतोड देखाइन्छ । बजेट रित्याइन्छ । कुरा सक्किगो ! प्रसङ्गवश भ्रमण वर्ष शुरू हुनुअगावै सरकारद्वारा जारी वक्तव्यहरूमध्येका केही अंशहरू यहाँ उल्लेख गर्न जरुरी देखिन्छ । विभिन्न मुलुकमा पुगेर
प्रेम दिवस !
मुकुन्द आचार्य नेपालीहरूले नक्कल गरेर धेरै राम्रा–नराम्रा कुरा सिकिरहेका छन् । कुइरेहरूले मनाउने ‘भ्यालेन्टाइन डे’को नक्कल गरेर हाम्रो युवा पुस्ताले पनि अचेल प्रेम दिवस मनाउने नाटक गर्न थालेको छ । अर्काको नक्कलभन्दा आप््mनो अक्कल राम्रFे हैन र ? धिक्कार छ, हामी नेपालीलाई १ जसले ईश्वरप्रदत्त आप्mनो बुद्धि विवेकको प्रयोग गर्दैनन् र अन्धो भएर अर्काको नक्कल मात्र गर्छन् १ प्रेम गर्न पनि हामीले अरूबाटै सिक्ने हो ? हामी साँच्चै पनि हनुमानजीकै खलकमा पर्छौं त ? सोचौं १ जाबो ‘आई लभ यू’ भन्नलाई पनि वर्ष दिन कुरेर बस्ने हाम्रा नेपाली युवकयुवती धन्यवादका पात्र हुन् । यस्तो धैर्य १ तर होश गर्नु हैं १ एक वर्षसम्म कुरेर बस्दा तिम्री नक्कली गर्लपे्रmन्डलाई अर्कैले झ्वाम् पार्ला नि! मेरो कुटीको छेउमैं त्रिभुवन पार्क भनिने प्रेम क्रीडास्थल छ । त्यहाँ सधैं दश–बीस थान जोडीले ‘आई लभ यू’ भनी टोपल्छन् १ झन् प्रेम दिवसको दिन त यस्ता दुर्घटनाहरू प्रशस्तै हुन्छन् । पार्कको बाहिर एम्बुलेन्सको व्यवस्था पनि छ, प्रेमको जाँड खाएर इन्तु न चिन्तु भएकालाई अस्पताल त कुदाउनै प¥यो नि १ सन्त कबीर दासल
कानू जाति र गणिनाथको सम्बन्ध
सञ्जय साह मित्र कानू जातिको इतिहास शताब्दीयौं शताब्दी पुरानो छ । महाभारतकालभन्दा पनि पुरानो जातिको रूपमा कानूलाई मानिएको छ तर कतिपय कुरा चाहिं विवादास्पद पनि आएका छन् । कतिपयले कानू जातिको कुलदेवता गणिनाथ चाहिं नै कानू जातिको उत्पत्तिकर्ता भएको तर्क निकाल्छन् भने कतिपयले चाहिं गणिनाथको उत्पत्ति हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै कानू जातिको अस्तित्व रहेको तथ्य दिन्छन् । गणिनाथलाई नाथ सम्प्रदायको एक उपासक पनि मानिएको पाइन्छ । नाथ सम्प्रदायमा गोरखनाथ पनि पर्छन् । गणिनाथको विषयमा जानकारहरू गणिनाथलाई भगवान् शङ्कर वा माता पार्वतीको मानसपुत्र मान्दछन् । मानसपुत्र गणिनाथको अवतरण केही सीमित अवधिको लागि भएको थियो र उनको पालनपोषण मनसाराम साहको घरमा भएको थियो । मनसाराम साह कानू थिए (कानू भनेर विभिन्न स्थानमा विभिन्न नामले बोलाइने कानू, कान्दू, हलुवाइ आदि हुन् किनभने सबै एकै हुन् भन्ने मान्यता राख्नेहरू पनि छन्) । गणिनाथलाई कतिपयले सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न माध्यममा कुनै एक जातिको बताउने काम पनि गरिरहेका छन् । वास्तवमा गणिनाथको अवतरणलाई हेर्ने हो भने उनी कुनै जातिको भन्दा पनि उनको पालनपोषण
विद्यालयमा धार्मिक गतिविधि गर्नु उचित हो ?
वैद्यनाथ ठाकुर राजनीतिक दलहरूले पटकपटक भनेको सबैले सुनेकै हो– विद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्दछ । भाषणमा यो प्रतिबद्धता जति बलियो देखिन्छ, व्यवहारमा यो त्यति नै फितलो रहँदै आएको छ । सबै दलले विभिन्न बहानामा विद्यालयभित्र विद्यार्थी तथा शिक्षक कर्मचारीबीचमा राजनीति गर्दै आएको सर्वविदित नै छ। यतिबेला हाम्रो देश धर्मनिरपेक्ष देशको रूपमा स्थापित भएको छ । देशभित्र हिन्दू, इस्लाम, इसाई, बौद्ध, किराँत, जैनलगायतका धर्मावलम्बीहरू मिलेरै बसेका छन् । यस्तोमा विद्यालयभित्र कुनै एउटा धर्मविशेष भिœयाउन हुन्छ वा हुन्न ? त्यो पनि परीक्षाको बेलामा ? यस्तो धार्मिक गतिविधिले विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर घटाउन मदत गर्छ कि गर्दैन ? धर्म जति सजिलो शब्द हो, त्यति नै विवादास्पद पनि हो । दैनिक जीवनमा धर्मको प्रयोग प्रायः हुने गर्छ । यसको लागि कुनै योग्यता या शिक्षा हासिल गर्नुपर्दैन । यो एउटा स्वाभाविक तरीकाले अभिव्यक्त हुने शब्द हो । धर्म भन्नाले हामीले असल काम, परोपकारी काम र सकारात्मक काम सम्झन्छौं । यस अर्थमा प्रायः सबैले भन्ने गर्छन् कि धर्म गर्नुपर्छ अथवा यो राम्रो काम हो । तर धर्म
चितवनमा पर्साको चर्चा
नाम वा बदनाम, कुनै पनि व्यक्ति, स्थान तथा ठाउँको नाम यही दुई कारणले चर्चामा आउने गर्छ । राम्रो या नराम्रो जुनसुकै रूपमा चर्चामा आए पनि त्यो चर्चासँग स्थानीयको इज्जत प्रतिष्ठा जोडिएको हुन्छ । आप्mनो ठाउँ वा आप्mना ठाउँका मानिसको नाम, राम्रो कामका लागि चर्चामा आउँदा गौरवान्वित महसूस हुन्छ भने नराम्रो कामसँग जोडिएर आउँदा हीनता तथा लज्जा बोध हुन्छ । चितवनमा सडक निर्माण शिलान्यासक्रममा पर्साको चर्चा भयो । वक्ताहरूले भने, “निर्माण कम्पनीले काम गर्दा पर्सामा जस्तो विलम्ब तथा ढिलासुस्ती र लापर्बाही नगरोस् । त्यसो भयो भने हामी चुप लागेर बस्दैनौं ।” चितवनको नारायणगढ–ठोरी हुलाकी सडक अन्तर्गत माडी देवेन्द्रपुर–बगही खण्डको सडक शिलान्यास कार्यक्रमका वक्ताहरूले विकास निर्माणको काममा कानूनी खोचे थापेर अड्चन तेर्साउन पनि नहुने बताए । वीरगंज–ठोरी र नारायणगढ–ठोरी हुलाकी राजमार्ग निर्माणको क्रममा छ । प्रारम्भमा वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि मात्रै नारायणगढ– ठोरी अर्थात् ठोरी–नारायणगढ हुलाकी सडक निर्माण गर्ने योजना थियो । सोही योजनाअनुरूप ६० किलोमिटरको वीरगंज–ठोरी हुलाकी सडकखण्
२०७६ फागुन १६ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
पर्सामा अवैध घरेलु मदिरा उद्योग फस्टाउँदै
प्रस, पर्सागढी, १५ फागुन/ पर्सा जिल्लाको पर्सागढी नगरपालिका–३ झबराहा टोलमा अवैध मदिराभट्टी सञ्चालन हुने क्रम रोकिएको छैन । चार सय घरधुरी रहेको सो वडामा तीन सय पचास घरधुरीमा अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन हुने गरेको छ । कोदो, भात, सक्खर, फिटकिरी, युरिया मलको प्रयोगबाट अवैध घरेलु मदिरा उत्पादन हुने गरेको र यहाँ उत्पादित मदिरा पर्सा जिल्लाको विभिन्न स्थानमा पु¥याउने काम भइरहेको छ । झबराहामा ठूलो सङ्ख्यामा अवैध मदिराभट्टी सञ्चालनमा रहेको कारण अहिले मकवानपुरबाट जीतपुर, परवानीपुर, वीरगंजसम्म ल्याइने अवैध घरेलु मदिरामा कमी आएको छ । केही वर्ष अगाडि बाराको जीतपुर, परवानीपुर र वीरगंज महानगरमा मकवानपुरबाट उत्पादित अवैध घरेलु मदिराले बजार ओगटेको थियो । भाडाको बसबाट ढुवानी गरेर अवैध मदिरा ल्याउने क्रममा अहिले कमी आएको छ । झबराहामा ठूलो परिमाणमा घरेलु मदिरा उत्पादन भइरहेको कारण सोही मदिराले अहिले जीतपुर, परवानीपुर, वीरगंजका साथै पर्सा जिल्लाको पोखरिया, महुवन, विन्दवासिनी, डोकैला बहुअरी, सुक्खा बन्दरगाह क्ष्Fेत्रलगायत क्ष्Fेत्रको बजार ओट्दै गएको छ । झबराहामा प्रतिबोतल रु ४० मा खरीद गर
जिप्रका पर्साले घूस खाएको आरोपमा चार प्रहरीलाई अख्तियारमा बुझायो
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ पर्सा प्रहरीले घूस खाएर अभियुक्तलाई छाडेको कसूरमा चारजना प्रहरीलाई अख्तियारको जिम्मा लगाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले फागुन ८ गते भारतीय नागरिकबाट बरामद रु २० लाख असूल गरी मानिस छाडेको कसूरमा अस्थायी प्रहरी चौकी इनर्वा गाउँका प्रसनि पूर्णबहादुर तामाङ, प्रह विष्णुदयाल चौधरी, प्रज राजबहादुर तामाङ र अवधेश राय यादवलाई हिजो पक्राउ गरेको र आज अख्तियारको जिम्मा लगाएको प्रहरी उपरीक्षक गङ्गा पन्तले बताइन् । अभियुक्त चारैजनाबाट भारतीय नागरिकलाई छाडेबापत लिएको रकम बरामद भएपछि अख्तियारको जिम्मा लगाएको प्रउ पन्तले बताइन् । पक्राउ परेका प्रसनि तामाङबाट रु ४ लाख, प्रह चौधरीबाट रु १ लाख १० र प्रज यादवबाट रु १ लाख २५ हजार बरामद भएको थियो । उनीहरूले आआप्mनो कोठामा रकम लुकाएर राखेका थिए । प्रहरी स्रोतका अनुसार फागुन ८ गते प्रह चौधरीले रु २० लाख रकमसहित एकजना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेका थिए । चौधरीले प्रसनि तामाङलाई खबर गरी अन्य प्रहरीको सहयोगमा चार घण्टासम्म वीरगंज–१६ भुटनदेवीमा नियन्त्रणमा राखेर कुरो मिलेपछि छाडेका थिए । सोही घटनाका एक अभियुक्त प्रज अवधे
वीरगंज चिनी कारखानाको जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ सङ्घीय सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वीरगंज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । यही फागुन ५ गतेदेखि १२ गतेसमम बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जानकारी गराएको छ । चिनी मिलको नाममा पर्सा जिल्ला, वीरगंज महानगरपालिका–१४ मा रहेको कित्ता नं ११३१ को १० बिघा ६ कठ्ठा ४ धुर मध्ये ६ बिघा जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको अर्थ मन्त्रलयका सचिव राजन खनालले प्रतीककर्मीसँगको कुराकानीमा पुष्टि गरेका छन् । चिनी मिलको बिक्री गरेर आउने रकमले सोही मिलको प्रयोजनमा खर्च गरिने सहमति भएको सचिव खनालले बताए ।
ठोरी नारायणगढ हुलाकी सडकमा कालोपत्रे शुरू, वीरगंज–ठोरीजस्तो विलम्ब नहोस्– वक्ताहरू
प्रस, ठोरी, १५ फागुन/ पर्साको ठोरीदेखि चितवनको नारायणगढसम्म पुग्ने हुलाकी सडक अन्तर्गत माडी क्षेत्रमा कालोपत्रे गर्ने काम बिहीवारदेखि शुरू भएको छ । माडीको देवेन्द्रपुर–बगही ८ किलोमिटर सडकखण्डमा बाटो कालोपत्रे गर्ने काम माडी नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष कृष्णराज अधिकारीले आज शिलान्यास गरेका हुन् । कार्यक्रममा माडीका वडाध्यक्षहरू रामबन्धु पोखरेल र भरतबहादुर गुरुङसँगै वडा सदस्यहरू र स्थानीयको उल्लेखनीय सहभागिता थियो । कार्यक्रमका वक्ताहरूले सडक कालोपत्रे भएपछि ठोरी र माडीको सामीप्यता बढ्नुका साथै दुवैतर्फको विकास निर्माणले फडको मार्ने बताए । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रभित्र पनि जतिसक्दो छिटो कालोपत्रे गर्न वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । ठोरीपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जङ्गल कटेलगत्तै बगहीबाट कालोपत्रे शुरू भएको हो । कार्यक्रममा सहभागी ठेकेदार पक्षका प्रतिनिधिहरूले वर्षायाममा पनि काम नरोकिने गरी नदीजन्य निर्माण सामग्री सङ्कलन शुरू भइसकेको जानकारी दिएका छन् । ठेकदारले हाल खोलामा डाइभर्सन बनाउनुका साथै गिट्टी–बालुवालगायत निर्माण सामग्री भण्डारण गरिरहेको वडाध्यक्ष
करणी र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा बढ्यो
प्रमोद यादव, पंचगावाँ, १५ फागुन/ पर्सा जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणी र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा बढेको छ । अदालतले जनाए अनुसार चालू आवको माघ मसान्तसम्म सात महीनामा १८ वटा जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस अघि आव २०७५–०७६ मा जबरजस्ती करणीका २७ मुद्दा दतर्F भएको र ८ वटाको पैmसला भएको छ। जबरजस्ती करणीमा चालू आवको सात महीनामा तीनवटा मुद्दा दर्ता भएको छ । गत वर्ष पाँचवटा मुद्दा दर्ता थियो । चालू आवको माघ मसान्तसम्म बालविवाह ११, बाल यौन दुराचार ४, अपहरण तथा शरीर बन्धक ७ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, बहुविवाह, गर्भपतन, बोक्सी, अप्राकृतिक मैथुनमा एक–एकवटा मुद्दा दर्ता भएको छ । पर्सा जिल्ला अदालतले सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा निरन्तर बढिरहेको जनाएको छ । २०७४–०७५ मा ११८ वटा मुद्दा दर्ता थियो भने २०७५/०७६ मा २१२ र चालू आवको सात महीनामा १४२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । दर्ता भएका मुद्दामा क्रमशः महिलासरह पुरुषबाट पनि मुद्दा दिने प्रक्रिया बढेको छ । २०७४–०७५ मा ११८ मध्ये १०८ मुद्दा महिलाबाट दिइएको र पुरुषबाट केवल १० वटा दर्ता भएकोमा २०७५–०७६ मा कुल २१२ मध्ये ९० मुद्दा पुरुषबाट गर
ग्रीनसिटीको आयोजनामा वृक्षरोपण
प्रस, वीरगंज, १५ फागुन/ समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत आदर्शनगर ग्रीनसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको संयुक्त आयोजनामा आज वृक्षरोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । पर्साका प्रजिअ विष्णु कार्कीले वृक्षरोपण गरेर कार्यक्रमको उदघाटन गरेका थिए । उनले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा युवाहरूको सक्रियताको सराहना गरे । प्रजिअ कार्कीले वातावरण जोगाउने कार्यमा युवाहरूले देखाएको जोश र जाँगरलाई अरूले पनि अनुसरण गर्नुपर्ने बताए । वृक्षरोपणबाट वातावरण जोगाउन प्रभावकारी भूमिका निर्वाह हुने हुनाले यसमा सक्रियता देखाइरहन उनले स्थानीय वासीलाई आग्रह गरे । ग्रीनसिटी सामुदायिक सेवा केन्द्र आदर्शनगरका अध्यक्ष्F जयप्रकाश खेतानको अध्यक्षतामा आयोजित वृक्षरोपण कार्यक्रममा पूर्वसांसद अनिल रूँगटा, महावाणिज्यदूत नीतेश कुमार, प्रहरी उपरीक्षक गङ्गा पन्त, पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष श्याम बन्जारा, व्यवस्थित वीरगंज अभियानका दिलीपराज कार्की, नेपाली काङ्ग्रेस वीरगंज महानगरपालिकाका सभापति भोला कलवार, प्रहरी निरीक्ष्Fकद्वय कमलप्रसाद पण्डित र दीपक साहलगायतको सहभ
नक्कली अनुमतिपत्र बनाउने महिला पक्राउ
प्रस, जनकपुरधाम, १५ फागुन/ सवारी चालक अनुमतिपत्र नक्कली बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जनकपुरले एकजना महिलालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । पक्राउ पर्नेमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ बस्ने रूबी मिश्र रहेको प्रहरीले जनाएको छ । मिश्रले तयार गरेको नक्कली अनुमतिपत्र आप्mनो छोरामार्फत सेवाग्रहीलाई बिक्री गर्ने गरेको खुलासा भएको छ । ट्राफिक प्रहरीले सवारी लाइसेन्स चेक गर्ने क्रममा माघ २९ गते महोत्तरीको गौशाला–१२ का कृष्णदेव कुशवाहासँग नक्कली लाइसेन्स फेला पारेको थियो । उनको बयानको आधारमा जनकपुरधाम–९ का चन्दन मिश्र पक्राउ परेका र मिश्रको बयानको आधारमा उनकी आमा रूबी मिश्रलाई पक्राउ गर्न सफल भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्र्कीले बिहीवार जानकारी दिएका छन् । मिश्रलाई जिल्ला अदालत धनुषाबाट चार दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रभु अस्पतालको घटना छानबीनमा मेडिकल काउन्सिलले ढिलाइ गरेको पीडित पक्षको आरोप
प्रस, वीरगंज,१५ फागुन/ वीरगंज–८ पानीटङ्कीस्थित प्रभु हस्पिटल एन्ड रिर्सच सेन्टरमा गत कात्तिकमा चिकित्सकको लापरवाहीले ज्यान गुमाएका दुईजना सुत्केरीका आफन्तहरूले बिहीवार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले छानबीनमा ढिलाइ गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ, पर्साको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रगतिनगरकी मृतक अमृता श्रेष्ठकी आमा निशा श्रेष्ठ र बारा, पचरौता नगरपालिका–१ निवासी सुनीता देवीका जेठाजु साहेब ठाकुरलगायतले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रवैयाप्रति आक्रोश ब्यक्त गरेका थिए । पीडित पक्षले गत मङ्सिर १३ गते पर्सा प्रहरीमा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी उजूरी दर्ता गराएपनि अहिलेसम्म प्रहरीले घटनाको निष्पक्ष छानबीन नगरेको भन्दै गुनासो पनि गरेका छन । केही दिन अगाडिमात्र अस्पताल प्रशासनले निश्शुल्क स्वास्थ्य शिविरलगायत सम्पूर्ण काम पुनः सञ्चालन गरेकोमा आश्चर्यमा परेको उनीहरूले बताएका छन् । यता अस्पतालकी डाक्टर लक्ष्मी थापा गुप्ताको नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाट मौखिकरूपमा अस्पतालको सम्पूर्ण काम सञ्चालन गर्न आदेश पाएको भनाइप्रति पीडितका आफन्तले गुनासो गर्दै न
आर्थिक समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार
शीतल महतो नेपाली समाजमा एउटा बहुप्रचलित उखान छ–जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको । नेपाली राजनीतिमा यसको अर्थ ‘सबै दल उस्तैउस्तै’ हो भन्ने बुझिन्छ । हुन त दलहरूले विभिन्न रङ र वादमा आपूmलाई फरक देखाउन चाहन्छन् । सिद्धान्ततः लोकतन्त्रमा दललाई समाजको फरक मनोविज्ञान, वर्गीय आधार र विविधताको प्रतिविम्बका रूपमा लिने गरिन्छ । समाजमा बहुस्वार्थ र बहुविचार हुन्छ । राज्यसत्ता यस्तै फरक स्वार्थ र विचारको द्वन्द्व र व्यवस्थापनको शासकीय संरचना हो । हाम्रो समाजको मनोविज्ञान, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध तथा संरचनामा पनि यस्तै विविधता छ । त्यसैले दलहरूमा पनि यस्ता विविधता हुनु स्वाभाविक नै हो । विश्वमा देखिएको राजनीतिक प्रवृत्ति पनि यही नै हो । तर पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा सबै दललाई आम नेपाली नागरिकले उस्तैउस्तै ठान्ने गरेको छ । उनीहरूको व्यवहार र कार्यशैलीमा कुनै ताŒिवक फरक पाइएको छैन । सिद्धान्त जे अँगाले पनि दलहरूको चरित्र भने उस्तैउस्तै देखिएको छ । भनिन्छ सिद्धान्तले व्यवहारलाई दिशा निर्देश गर्छ तर नेपालको राजनीतिमा यो भनाइ पुष्टि भएको देखिएको छैन । सबै दलमा नेता, कार्यकर्ता र जनताको सम्बन्